Fivezọ ise na-anabata imewe na-agbanwe SEO | Martech Zone
Wzọ ise na-anabata imewe na-agbanwe SEO
Tuesday, April 9, 2013 Monday, June 10, 2013 Jayson DeMers
Nzaghachi imewe doro anya na nnukwu ihe; nnukwu ihe na Mashable kelere 2013 dị ka "afọ nke mmeghachi omume na-emeghachi omume." Imirikiti ndị ọrụ weebụ ghọtara nke a - mmeghachi omume na-agbanwe ụzọ thentanetị dị, mmetụta, na ọrụ ya.
Enwere ihe na-apụtachaghị ìhè na-aga. Imebe mmebe na-agbanwe SEO. Mgbe anyị lere anya karịa CSS nke mmeghachi omume na-anabata, anyị na-ahụ mgbanwe dị ukwuu na usoro ọchụchọ na-emetụta mmetụta na nyocha ekwentị na desktọọpụ.
Kedu ihe bụ nsogbu SEO nke ọbịbịa nke nzaghachi na-eweta? Lee ise.
1. Google nwere mmasị na mmeghachi omume na-agbanwe agbanwe, nke pụtara na nsonaazụ ọchụchọ ga-amasị saịtị ndị na-eji omume kacha mma eme ihe.
Ọ bụ ezie na anyị na-ala azụ ikwupụta nkwọcha na Google nwere ịhụnanya na RWD, anyị nwere ike ịchọpụta mmekọrịta siri ike maka mmemme kacha mma RWD. Mgbe Ode blọgụ Google banyere Ntughari Ntughari, SEO Gburugburu Isiokwu bipụtara otu edemede na-akọwa ihe kpatara ya ihe mere Google ji enwe mmasị imewe. Ihe ato kpatara - ọdịnaya na-abụghị nke e kere eke, ọ nweghị nsogbu URL ọ bụla, na enweghị nsogbu ntụgharị - ha niile bụ akụkụ nke SEO siri ike.
Mgbe Google flinches, onye ọ bụla na-awụli elu. N'ihi ya, ọ bụ na anabata imewe. Ebe ọ bụ na Google dere n'ezie Egwuregwu Egwuregwu, ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya inye ha nsọpụrụ kwesịrị ekwesị maka mkpanaka ha na nnabata. Dika algọridim na-aga n'ihu na-etinye aka na 2013 na gafere, anyị nwere ike ịhụ nrịbama na saịtị ndị na-eji eme ihe nke ọma.
Ọ bụrụ na Google na-ahọrọ ime nzaghachi, nke ahụ bụ nnukwu ihe mgbanwe egwuregwu maka ọchụchọ.
2. Ndị ọrụ ekwentị na-achọ ezigbo ahụmịhe, saịtị ndị na-emeghachi omume na-enyekwa ezigbo mma maka ndị ọrụ ekwentị.
Isi okwu ahụ dị n'elu dị ntakịrị. Ka o sina dị, ọ bụ ihe dị mkpa maka SEO. Nke a bụ otu o si arụ ọrụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-agagharị agagharị. Ebe nrụọrụ weebụ gị na-anata ndị ọbịa na-agagharị agagharị karịa ka ọ dị na mbụ. Tụkwasa m obi; lelee nchịkọta. Ndị ọrụ ekwentị niile chọrọ ezigbo ahụmịhe. Ihe ka mma ha nwere, mma gị SEO. Lee ihe kpatara ya.
Ogo saịtị bụ ihe dị mkpa SEO. Ọnụ ego dị elu nwere ike ibu nnukwu iku megide ogo saịtị. Ọdịmma nke njirimara gị, nke ka ukwuu uru SEO gị. Mgbe ndị ọrụ mkpanaka gara na saịtị na-abụghị nke kachasị ma ọ bụ na-anabata, enwere ike ịdị ukwuu na ha ga-agbagha, jiri nwayọ na-eweda ogo saịtị gị. Isi okwu a gbasara ogo na UX bụ ezigbo arụmụka nke Kristina Kledzik, onye ederede na Moz na-eme ka ikpe na saịtị ọ bụla kwesịrị ime mgbanwe ngbanwe.
Ka SEO na-aga, nke a bụ okwu nzaghachi kachasị dị mkpa. Na ha mkparịta ụka nke imebe ihe, Magazin Smashing na-ekwu, "metric kachasị mkpa bụ ka websaịtị si arụ ọrụ maka onye ọrụ," na-ekwusi ike na saịtị ndị na-anabata dị mkpa.
Iji mee ka ndị na-ege ntị na-eto eto na-eto eto nke ọma, ị ga-enyerịrị ha ahụmịhe onye ọrụ ha chọrọ. Ọ bụ naanị ụzọ iji chekwaa ogo saịtị ma nweta ogo ọchụchọ ka mma.
3. Ebe nrụọrụ na-anabata ihe na-enweta ntinye ederede ka mma, ya mere, nsonaazụ ọchụchọ dị elu.
Ekele dịrị Google na algọridim na amamịghe, a na-arụ ọrụ na saịtị maka ndị ọrụ ekwentị. Ka o sina dị, saịtị ndị na-anabata ihe bụ nhọrọ kachasị mma maka usoro ntinye aha dị ọcha, ngwa ngwa, na nke ziri ezi.
Usoro nhazi nke Google dị ka ọ masịrị saịtị na-eji usoro nzacha dị ọcha, ndị ahụ “saịtị ndị na-arụ ọrụ niile na otu usoro URLs, yana URL ọ bụla na-arụ otu HTML na ngwaọrụ niile yana iji naanị CSS iji gbanwee etu esi sụgharịta ibe ngwaọrụ. ” Nke a bụ akụkụ nke Ntuziaka Google ka “ewu ama-kachasị weebụsaịtị,” nke ị nwere ike isi sụgharịa n'ime “search engine kachasị weebụsaịtị.” Ihe ọzọ bụ, ha kwuru hoo haa, “nke a bụ nhazi Google kwadoro.”
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka Google depụta saịtị gị ngwa ngwa na ụzọ kachasị mma, ị nwere ike were okwu ha n'okwu a: jiri mmeghachi omume na-anabata ya. Soro ndụmọdụ ha, ha ga-emeso gị n'ụzọ ziri ezi mgbe ọ na-edepụta ndepụta na ọchụchọ.
4. Ọdịnaya na nhazi ọdịnaya dị mkpa karịa mgbe ọ bụla.
Nzaghachi imewe bụ ihe niile banyere trimming ngafe abụba si a website. Otú ọ dị, "egbutu abụba" dị ize ndụ. Ikwesiri ịkpachara anya ka ị ghara ibelata SEO ka ị na-ebelata ma na-ebepụ.
Iji jigide ọnụọgụ SEO nke saịtị, ọdịnaya niile dị mkpa kwesịrị ịgafe n'elu ibe ahụ. Ihe kpatara ya? Iji jigide uru SEO bara uru, saịtị ahụ kwesịrị ịnwe ọdịnaya dị n'elu karịa na mkpanaka mkpanaka na desktọọpụ. Nchọgharị ọchụchọ na-enyocha ntinye ọdịnaya yana ọdịnaya n'onwe ya. Ọnọdụ dị mkpa.
Ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na ndị mmepe na-ahụ ihe eserese, ihe mmịfe, na menu nhọrọ hogging n'elu nke ibe ahụ. Clutdị ọgba aghara dị otú ahụ nwere ike ibute nsogbu maka SEO. Ọtụtụ saịtị na-akwado ntakịrị ntakịrị na ịdị mfe nke saịtị ndị nwere ọdịnaya. Awww akọwapụtala “ọdịnaya nke mbụ” dịka ọnụọgụ ọnụọgụ ntanetị weebụ nke 2013. Ọ na-eme ka uche dị ọcha maka SEO, UX, RWD, CRO (yana naanị banyere mkpirisi okwu ọ bụla ịchọrọ ịchụpụ ebe ahụ). Iji mee ka ihe dị n'ụgbọ, weta ọdịnaya SEO ahụ dị oke ọnụ ahịa na elu nke ibe ahụ.
5. Mobile URL, kama saịtị na-emeghachi omume, ka bụ nhọrọ maka SEO.
N'agbanyeghị ọrịa na-efe efe na RWD, ụfọdụ ndị ọrụ ka na-akwado ụzọ mkpanaka URL. Bryson Meunier na-eme ka ikpe ya doo anya na ya Edemede Nchọgharị Ngini: “Nabata Web imewe ka o yiri ka nwere aha na-erughịrị mmadụ ịbụ ndị kasị mma nhọrọ maka SEO. N'ezie, URLs mkpanaka nwere ike bụrụ nhọrọ kacha mma maka SEO. ”
Ee, nke ahụ bụ nnukwu ikpuru. [Tinye pundits na-eti mkpu na ọnọdụ ha masịrị ha.] Obi dị anyị ụtọ, Google nwere ike ịkọwa ọdịiche nke saịtị ugbu a. Ya mere, otu URL na-ekwusi ike maka ebumnuche SEO bụ arụmụka na-abụghị arụmụka, maka iwebata mkpado switchboard.
Meunier na-eme ka ikpe ahụ na ndị ọrụ mkpanaka na-achọ ihe dị iche iche ma na-achọ ozi dị iche, dị iche na ndị ọrụ desktọọpụ. (Enwere m obi abụọ.) Ya mere, ọ na-ekwu, saịtị nwere ike ịrụ ọrụ kachasị mma maka ha maka mkpa ha na mkpa ha - yabụ saịtị ejiri rụọ ọrụ. Na mgbakwunye, Meunier na-ekwusi ike mkpa nke saịtị dị iche iche dị na ntanetị site na saịtị ọsọ na UXD, na-ekwusi ike ndị na-ege ntị dị iche iche nke ahịa ekwentị.
Chọpụta uru SEO bara uru ga-eme ka mmadụ dabere na ndị na-ege ya ntị. Ọ bụ ezie na a na-ekwukarị RWD ma na-eto ya dị ka SEO Holy Grail, ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere ike ịhọrọ atụmatụ SEO nke gụnyere URL mkpanaka kama ịza ajụjụ. Dịka usoro izugbe na-aga n'ihu, agbanyeghị, azịza azịza kachasị dị ka ọ dabara adaba maka ike SEO. A sị ka e kwuwe, ijigide ikike usoro nke URL mbụ gị, ime ka ụzọ gị dị mfe, na ịmezi njikwa ọdịnaya gị niile bụ usoro SEO kachasị mma nke bụ akụkụ nke ngwugwu mmeghachi omume.
Onye ọ bụla na-aghọta na SEO bụ ubi na-agbanwe mgbe niile. A na-ebipụta ozi ọhụụ na mgbe ụfọdụ ozi na-emegiderịta onwe ha. Ọ dịghị onye ọ bụla juru anya na mmeghachi omume na-agbanwe SEO. Ezigbo ihe ịtụnanya nwere ike ịbịa na etu mgbanwe dị etu a siri dị n'ezie. Iji nwee ihe ịga nke ọma na nchọta, saịtị ga-eche ihu na mgbanwe mgbanwe, ma mee ihe ọ ga-ewe iji mee mgbanwe ngbanwe ahụ.
Tags: nhazi mmeghachi omumeA
Jayson DeMers bụ nchoputa & CEO nke Mmemme Email, ngwá ọrụ na-arụpụta ihe na-ejikọ na akaụntụ Gmail ma ọ bụ G Suite gị ma jiri anya gị hụ ọrụ email gị - ma ọ bụ nke ndị ọrụ gị. Soro ya gaa n'ihu Twitter or LinkedIn.
Ajụjụ ọnụ Diners Club: Iwulite Mgbasa Ọha
The atọ Bọket nke Social Media Marketing Okwu
Jun 23, 2013 na 8:05 AM
Ezigbo ederede na amaokwu akwadoro nke ọma. Amaghị m na Google nwere nkwado dị ukwuu maka RWD.
Jul 18, 2013 na 3: 07 AM
Nnọọ Informative isiokwu, ga na-niile ihe ndị a n'uche m mgbe emebe website. Daalụ
Dee 4, 2013 na 3: 12 AM
Ezigbo ederede: D
Aug 6, 2014 na 2: 35 AM
William Carter kwuru
Jul 13, 2015 na 11:50 PM
Ọ gafere isiokwu a n'oge na-adịbeghị anya mana ọ ka bara uru. Emechara m kpebie ka m wulite websaịtị m nke ọma, ọ na-arụkwa ọfụma! Karịsịa mgbe emelitere mmelite SEO nke Google n'afọ a.